I-Mini Groove Deep Bear Bearings Development Development Industry - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Miniature Deep Groove Ball Bearings Ukuthuthukiswa kwemboni
Ukuveza ukuthuthukiswa kwemboni kubhekene nezimo ezithile ezingathandeki
Okokuqala, izimoto, imishini yezolimo, imishini yasemakhaya kanye nokunye okungekho emakethe kuyoba nethonya elithile ekuthuthukiseni imboni yokukhiqiza. Izindleko ezinkulu zempahla kanye nezindleko zabasebenzi ngo-2011 kulindeleke ukuba zibonise umhlangano, ukuze zenze ukucindezelwa kwezindleko zebhizinisi.
Okwesibili, izinga lokushintshaniswa kwe-RMB lizoqhubeka likhula, ukukhiqizwa okujwayelekile kanye nemikhiqizo ephakathi kwemikhakha yokukhiqiza kuyoqhubela phambili ukunciphisa ukuncintisana kokukhiqiza imikhiqizo, ukucindezela kuyokwandisa kancane kancane ukuthengiswa kwempahla, ukukhiqizwa kwemikhiqizo kuzothuthukiswa.
Okwesithathu, ngokuthuthukiswa okusheshayo nokuqhubekayo kwezomnotho waseChina, izinkampani zomhlaba jikelele ezithwele izinkampani ziye zasheshisa ukwandiswa kokwakhiwa kweChina, ukuncintisana okuphezulu kwamakethe kuyobe kukhulu kakhulu. 1, ukuhlushwa kwemikhiqizo yokukhiqiza imboni yaseChina iphansi. Ezweni eliphethe amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-40 ekuthengiseni, izinkampani eziyisishiyagalombili ezinkulu zezwe emhlabeni zingu-75% kuya ku-80%. Izinkampani ezinkulu ezimbili zaseJalimane zaziyi-90% yenani lazo, i-Japan 5 yayingamaphesenti angama-90 ephelele, i-United States ingu-56% ephelele. I-Wazhou yaseChina 7 yokudayiswa kweminyaka engaphezu kuka-1 billion yuan yokuphatha amabhizinisi, ukudayiswa kwabalelwa ku-28.3% kuphela embonini.
2, ukucwaninga kwemboni kanye nokuthuthukiswa kwemboni yaseChina kanye nekhono elisha elincane. Njengamabhizinisi amaningi emishini yokwakhiwa kwamasha kanye nokusebenza, ucwaningo nentuthuko kanye nokuthuthukiswa kokutshalwa kwezimali, ukuthuthukiswa kwamathalenta kusesezingeni eliphansi, kuhlanganise nezikhungo zocwaningo lwesayensi zesayensi-oriented ebhizinisini, umbuso awunawo ucwaningo lwezobuchwepheshe kwezobuchwepheshe obuvamile. , ngaleyo ndlela inciphisa imisebenzi yokucwaninga nokuthuthukiswa embonini. Ngakho-ke, yonke imboni, & quot; ezimbili ezibuthakathaka & quot; evelele, okungukuthi, ucwaningo oluthakathaka lwamaqiniso, ukubamba iqhaza ezindinganisweni zamazwe ngamazwe ukuthuthukisa ubuchwepheshe obuthakathaka, obungaphansi kokuqala, imikhiqizo engaphansi kwemvume. Njengamanje, ukuklama nokukhiqiza ubuchwepheshe bethu ngokuyinhloko ukulinganisa, amashumi eminyaka ohlelweni oluqhubekayo. Umthamo wokuthuthukiswa komkhiqizo uphansi, ukusebenza: Nakuba i-host host ehambisana nezinga elingama-80%, kodwa izimoto ezihamba ngesivinini esitimela, izimoto eziphezulu, amakhompiyutha, ama-air conditioners, i-high level rolling mill kanye neminye ibamba elibalulekile elisekela nokugcinwa izibhebhe, ngokuyinhloko ngokungenisa ngaphakathi. I-China yokukhiqiza imboni yokukhiqiza ubuchwepheshe iphansi. Imikhiqizo ye-China yokukhiqiza inqubo yokukhiqiza ubuchwepheshe kanye nentuthuko yezobuchwepheshe ihamba kancane, iphansi i-CNC yokushisa izinga, ukugaya izinga lokuzenzekelayo liphansi, izwe kuphela imigqa yokukhiqiza okuzenzakalelayo engu-200 kuphela. Amabhizinisi amaningi, ikakhulukazi amabhizinisi anikezwe nguhulumeni njengokukhiqizwa okuyinhloko namanje imishini yendabuko. Ekubhekeni kokuphila nokuthembeka kwenqubo ebalulekile yokushisa nokushisa okuthuthukisiwe, njengemimoya yokulawula ukushisa, ukucubungula kabili, ukukhishwa kwe-bainite kanye nokunye okuncane, izinkinga eziningi zobuchwepheshe azihluleki ukufeza ukuphumelela. Ukukhiqiza ucwaningo lwensimbi entsha nokuthuthukiswa, ukuthuthukiswa kwekhwalithi ye-steel, ukugcoba, ukupholisa, ukuhlanza nokuhlanza, ukuhlukumeza okuncane nokunye ucwaningo lwezobuchwepheshe kanye nokuthuthukiswa, namanje akukwazi ukuhlangabezana nekhwalithi yemikhiqizo nezidingo zekhwalithi. Ngenxa yalokho, ikhono lokusebenza liphansi, ukungahambisani kahle kuyimpofu, ubungako bokucubungula komkhiqizo bukhulu, ikhwalithi ehambisanayo yomkhiqizo ayizinzile futhi ukuveza ngokunembile, ukusebenza, ukuphila nokuthembeka kuyathinteka.
I-Rihooindustry.Com Ukuveza Uhlobo